Webhu Inowanikwa Pamutemo | Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Iyo webhusaiti yeOta Ward Cultural Promotion Association inofanirwa kuwanikwa kune wese munhu, kusanganisira vakweguru nevanhu vakaremara., Software neMasevhisi-Chikamu 8341: Webhu Zvemukati, nechinangwa chekutevedzera chikamu "AA".
* Chinyorwa "kutevedzera" mune ino mutemo chakanangana nechinyorwa chakatsanangurwa muRuzivo uye Kutaurirana Kupinda Kanzuru Webhu Inowanikwa Yezvivakwa Komiti "JIS X 8341-3: 2016 Kuteedzera Kuteedzera Nongedzo yeWebhu Zvemukati-Kurume 2016 Edition".
Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano Rekutanga
Target yekuenzanisa mwero uye kupindura
Inoenderana neJIS X 8341-3: 2016 Chikamu AA
Maitiro ekubudirira kuwedzera
Iyi inotevera nhanho zvinhu zveAAA
JIS X 8341-3 2.2.3 Nguva-yakazvimirira Kubudirira Criteria
JIS X 8341-3 2.3.2 Zvinobudirira maitiro e3 kupenya
JIS X 8341-3 2.4.8 Maitiro Ekubudirira echinzvimbo chazvino
PDF (Inotakurika Gwaro Fomati) faira
Izwi (Shoko (Microsoft Shoko) faira
Masevhisi anopihwa kubva kunze nekuperekedza zviri mukati kana mapeji ewebhu, mifananidzo, mavhidhiyo, nezvimwe.
* Muenzaniso we3.
Sevhisi dzakapihwa negoogle (google tsika yekutsvaga, mavhidhiyo e youtube, google map, Google Street View, nezvimwewo
SNS (Twitter, Instagram, LINE, nezvimwewo)
Mitauro yemitauro yakawanda inogadzirwa neshanduro otomatiki yakapihwa nemasidomaini
Kwete-zvinyorwa zvemukati A 〇 〇
Audio chete uye vhidhiyo chete (yakanyorwa) A - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Caption (yakanyorwa) A - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Audio yekutsanangudza kana imwe yemukati midhiya (yakanyorwa) A - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Caption (live) AA - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Audio chirevo (yakanyorwa) AA - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Ruzivo uye hukama A 〇 〇
Kurongeka kunoreva A 〇 〇
Zvinhu zvinonzwika A 〇 〇
Kushandiswa kwemavara A 〇 〇
Kudzora kwezwi A - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Kusiyanisa (padiki chikamu) AA 〇 〇
Resize mavara AA 〇 〇
Mufananidzo wemavara AA 〇 〇
Hapana chirauro chekhibhodi A 〇 〇
Kugadziriswa kwenguva A - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Mira zvishoma, mira uvande A 〇 〇
Nguva yakazvimirira AAA - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
XNUMX inopenya kana pasi peiyo kukosha kwechikumbaridzo A - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
XNUMX nguva dzechiedza mwenje AAA - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Bvisa skip A 〇 〇
peji peji A 〇 〇
Tarisa kurongeka A 〇 〇
Chinangwa cheiyo chinongedzo (mune mamiriro) A 〇 〇
Multiple zvinoreva AA 〇 〇
Misoro uye zvinyorwa AA 〇 〇
Tarisa kuona AA 〇 〇
Mutauro wepeji A 〇 〇
Mimwe mitauro AA 〇 〇
Paunenge uchitarisa A 〇 〇
Panguva yekuisa A - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Kufambisa kufamba AA 〇 〇
Kusiyanana kwakasiyana AA 〇 〇
Kukanganisa kuzivikanwa A - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Chitaera kana tsananguro A - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Kanganiso kururamisa mazano AA - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Kukanganisa kudzivisa (zviri pamutemo, zvemari uye data) AA - 〇 Hapana zviripo zvirimo.
Kutsiva A 〇 〇
Zita, chinzvimbo uye kukosha A 〇 〇
* Kubva munaKurume 3rd gore raReiwa
Nhare mbozha: 03-3750-1611